Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay heshay war weyn oo ku saabsan Erling Braut Haaland , warkaasi oo ah in ciyaaryahanka qudhiisa uu xiiseynayo u dhaqaaqista Stamford Bridge.
Thomas Tuchel ayaa loo maleynayaa inuu mudnaanta siinayo u dhaqaaqista weeraryahan cusub oo heer caalami ah xagaagan, iyadoo mustaqbalka Tammy Abraham aan la hubin iyo Timo Werner oo la halgamaya la qabsiga kubada cagta Ingariiska.
Blues ayaa lala xiriirinayay inay dib ula soo saxiixato Romelu Lukaku , laakiin ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Belgium ayaa dhawaan diiday inuu ka tago Inter Milan xagaagan.
Si kastaba ha ahaatee, The Telegraph ayaa warinaysa in Haaland uu jeclaan lahaa inuu u wareego Chelsea, wuxuuna ku faraxsan yahay inuu sugo 12 bilood oo kale ka hor inta uusan la xiriirin tababarihii hore ee Dortmund Tuchel.
Dortmunt ayaa loo maleynayaa inay heystaan ​​lacag dhan 172m si ay u cunaqabateeyaan bixitaanka Haaland xagaagan, laakiin heshiiska lagu fasaxayo xidiga Norwey wuxuu la micno yahay in lagu heli karo qiimo 66m ah marka la barbardhigo sanadka soo socda.
Haaland ayaa xilli ciyaareedkii 2020-21 ku soo gabagabeysay 41 gool iyo 12 caawin 41 kulan uu ciyaaray tartamada oo dhan, waxaana uu dhaliyay goolkii guusha ee Norway kulankii ay 1-0 kaga badiyeen Luxembourg horaantii bishaan.
Related Topics:BiiroBrautCadeeyayErlingHaalandkooxdakooxda.com wararka maantalaacib soWararka CiyaarahaWararka Maantawararka maanta ethiopiawararka maanta hiiraan onlineXiiseenayo
Wararka Maanta : Isku Aadka Premier League Oo La Shaaciyay: Furitaanka Usbuuca Hore,...
Wararka Maanta : Somaliland: Natiijooyin cusub oo doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ah ...